राजपा महाधिवेशन टर्दै : कार्यव्यस्तता कि पार्टी फुट्ने डर ?
प्रकाश बस्याल | प्रकाशित: २०७६-१-२ गते
काठमाडौं : वैशाख पहिलो साता हुने भनिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीको महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ । ६ पार्टी मिलेर बनेको राजपा एकताको २ वर्ष बित्न लाग्दा पनि महाधिवेशन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय वैशाख ७ देखि ९ का लागि तय भएको महाधिवेशन तयारी नपुकाले पर धकेलिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
२०७४ असार ३० मा निर्वाचन आयोगले ६ पार्टीको एकीकरणलाई वैधानिकता दिएको थियो  । त्यसका आधारमा आगामी असार मसान्तमा एकताको दुई वर्ष पुग्दैछ  । राजपाको विधानमा पनि दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने उल्लेख छ । तर अबको तीन महिनाभित्र महाधिवेशन हुनेमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता नै विश्वस्त छैनन् ।
उता विधानअनुसार महाधिवेशन नगरे उसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । तर नेताहरू भने महाधिवेशन गराउने भन्दा पनि नेतृत्वको बारेमा बढी चिन्तित देखिएका छन् । महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्न भन्दै पटक पटक बैठक बसेपनि नेताहरू विषय केन्द्रित हुन नसकेको आरोप लागेको छ ।
६ जनाको नेतृत्व भएकाले भावी महाधिवेशनबाट कसले नेतृत्व हत्याउने भन्ने आन्तरिक चलखेल सुरु भएको छ । अहिलेसम्म आलोपालो नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्षहरू समान नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नेमा शङ्का छ ।
महाधिवेशनपछि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोमध्ये कसको नेतृत्व हुने भन्नेमा आन्तरिक कानेखुसी सुरु भएको छ । ठाकुर तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) तथा महतो तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष हुन्  ।
तमलोपा र सद्भावना दुवैको पुरानो राजनीति र सङ्गठनात्मक पृष्ठभूमिसमेत भएकाले नेतृत्वका लागि उनीहरूकै रस्साकसी छ । महेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादवका पनि राजपामा छुट्टाछुट्टै समूह छन्  । जसले ती समूहमध्ये धेरैलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् उसैले नेतृत्व लिने सम्भावना छ ।
महाधिवेशनका लागि सदस्यता लिने र नवीकरण गर्ने काम चैत १५ मा सकिएको छ । सदस्यताको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि जिल्ला अधिवेशन गर्नुपर्ने भएपनि प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । माघ अन्तिमसम्ममा सदस्यता वितरण टुंग्याएर फागुन महिनामा प्रदेश तहसम्मको अधिवेशन सक्ने बताएको राजपाले चैत १५ सम्ममा बल्ल सदस्यता वितरण सकेको हो ।
राजपाले महाधिवेशन केन्द्रित भएर २७ जिल्लामा सदस्यता वितरण गरेको जनाएको छ ।
यता अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले भने आफूहरूमा कुनै असहमति नभएको बताए । सबै अध्यक्षले एकल नेतृत्वलाई स्वीकार गरेकाले महाधिवेशन गर्न कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।
राजपाभित्रको असहमतिले महाधिवेशन सर्‍यो भन्नु गलत भएको उनले बताए । ‘पार्टी भित्र फरक बिचार हुनु स्भाविक हो । राजपा भित्र पनि वैचारिक बहस छ तर नेताहरूले एकल नेतृत्वमा जाने कुरामा सहमति जनाइसक्नुभएको छ’ उनले भने, ‘नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू फुटेका छन् , कोही फुटेर फेरी जुटेका पनि छन्, राजपा पनि त यही वातावरणमा छ ।’
मधेस केन्द्रित विभिन्न ६ वटा दल मिलेर राजपा गठन भएपछि पहिलो पटक महाधिवेशन हुन लागेको हो ।
‘हामी परिवारसँगै रुन चाहन्छौँ ’
मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्दै गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन( फोटो फिचर)
वनमन्त्रीलाई सांसदहरुकाे आग्रह - 'माग चाँडै सम्बाेधन हाेस्'
श्रीमान श्रीमतिको मर्यादाक्रम समान !
मनै लोभ्याउने घाँसे मैदान
काल बन्दै सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन, रोकथाममा चुनौती
जनकपुरधाम : जनकपुरमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । जनकपुर रेल्वे ट्रेक छेउमा अन्दाजि ६० वर्षीय पुरुषको शव बेवार..
नारायणहिटीको ठीक अगाडि दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालय नै यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्..
प्रेमका दश थरी प्रकार
प्रेम आफैंमा एक यस्तो चिज हो, जसमा भावना र महसुस (फिलिङ) जोडिएको हुन्छ । प्रेम यस्तो अनुभव हो जसमा मानिसहरुलाई संशा..
काठमाडौं : नेकपाको संगठन परिचालनमा महत्त्वपूर्ण मानिने शक्तिशाली संगठन विभागको जिम्मेवारी वामदेव गौतमले पाउने भएका..
काठमाडौं : देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएक..
आजको राशिफल : साउन ४, शनिबार
आज–०४ साउन २०७६ शनिबरको राशिफल मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) धार्मिक तथा समाजसेवामा मन ला..